PRADEEP BASHYAL: 'मलाई क्रेजी फ्यान चाहिन्छ’
'मलाई क्रेजी फ्यान चाहिन्छ’
विश्वकै सबैभन्दा सेक्सी डिजेका रूपमा चिनिन्छिन्, मारी फरारी । रसियाको गर्लडिजेज एजेन्सीमार्फत काम गर्ने फरारी हाल पोर्चुगलमा बस्छिन् । टपलेस भएर डिजेइङ् गर्न माहिर उनी मोडलिङ् जगतमा समेत उत्तिकै रुचाइने सेलिबि्रटी हुन् । थुप्रै मुलुकका चर्चित क्लब तथा समारोहमा आफ्ना प्रस्तुति दिइसकेकी फरारी नयाँ वर्षको अवसरमा काठमाडौँ आउँदा गरिएको कुराकानी :
काठमाडौँ बसाइ कस्तो रह्यो ?
म पहिलोपटक काठमाडौँ आएकी हुँ । नयाँ वर्ष परेको हुँदा यहाँको बसाइ रमाइलो र विशेष रह्यो। नेपालीले राम्रैसँग रमाइलो गर्न जानेका रहेछन्।
अन्य ठाउँ र यहाँ डिजेइङ् गर्नुको फरक के रह्यो ?
यहाँ आउनुअगाडि मनमा कताकता सोचेजस्तो नहोला कि भन्ने लागिरहेको थियो। म र मेरो डिजेइङ्बारे के कस्तो प्रतिक्रिया देलान् भन्ने पनि थियो। तर, मैले यहाँ सोचेभन्दा भिन्न परविेश पाएँ। नेपाली तन्नेरीहरूले मलाई राम्रोसँग सघाए। न्युयोर्क, युरोपतिर हुने पनि यस्तै हो।
एउटी सेक्सी महिला डिजेलाई नेपाली तन्नेरी कस्ता लागे त ?
निकै चलाख र सम्हालिनसक्नु । उनीहरू खुसी भएको देखेँ । यहाँका केटीहरू पनि कम रहेनछन्।
एउटा डिजेले कस्ता सहभागीको अपेक्षा राखेको हुन्छ ?
म पाँच वर्षयता डिजेइङ् गररिहेकी छु। हरेक डिजेले आफ्नो कामबाट सहभागीहरू रमाउन् भन्ने सोच्छ। पार्टीमा मज्जाले खुलेर या क्रेजी भएर सहभागी भएको देखियो भने डिजेलाई समेत सहज हुन्छ।
अनि 'क्राउड’ नि ?
मानिसको संख्याले मलाई त्यति धेरै फरक पार्दैन। मैले अमेरकिाको मियामीमा १० हजारभन्दा बढी दर्शकमाझ प्रस्तुति दिएकी छु भने ५०/६० जनाको बीचमा पनि। जति छन्, तिनीहरू कत्तिको 'इन्गेज' हुन्छन् भन्नेले बढी महत्त्व राख्छ।
काठमाडौँका सम्झनलायक क्षण के के रहे ?
म हेलिकप्टरबाट सहर घुमेँ। डाँडाकाँडातिर पनि गएँ। अहिले मेरो फेसबुकमा यहाँका फ्यानले पठाइरहेका क्रेजी म्यासेजले यो ठाउँ सम्झनलायक बनाएको छ। उनीहरूको प्रेम देख्दा मलाई फेरि पनि नेपाल आएर प्रस्तुति दिन मन लागेको छ।
तस्विरहरु: लक्ष्मीप्रसाद ङाखुसी
written by Admin at 11:13 AM
Labels: Entertainment, QnA
Bishnu January 8, 2013 at 11:53 AM
WOW!! Good Job, Pradeep.. I like this article.